स्वास्थ्यवर्धक भोजन दही,कतै छुटाउनुभएको छ कि ? « Karobar Aja
स्वास्थ्यवर्धक भोजन दही,कतै छुटाउनुभएको छ कि ?
दस्तावेज श्रावण १९ बिहिबार २०७४ – दहीलाई तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यवर्धक भोजनको सूचीमा थपिहाल्नुहोस्, यदि अहिलेसम्म यसलाई छाड्नु भएको छ भने।तपाईं सादा, ग्रीक, स्वादिष्ट वा ‘लो फ्याट’ जुनसुकै दही खान सक्नु हुन्छ। किनकि दही पोषणले भरिपूर्ण खानेकुरा हो। यसले तपाईंलाई पर्याप्त क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन बी, पोटासियम, फस्फोरस, म्याग्नेसियमजस्ता पोषण दिन्छ।
लो फ्याट ८ औंस (करिब २ सय २४ ग्राम) दहीले हामीलाई चार सय मिलिग्रामभन्दा बढी क्याल्सियम दिन्छ, जुन हामीलाई दैनिक चाहिने क्याल्सियम मात्राको आधा हो । दूध ‘ल्याक्टोब्यासिलस बल्गारियस’ र ‘स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस’ ब्याक्टेरियाले फर्मेन्टेसन भएर दहीमा परिणत हुन्छ। ‘प्रोबायोटिक्स’ पनि भनिने स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक यी दुवै ब्याक्टेरियाले दहीलाई स्वादिलो बनाउनुका साथै लामो समयसम्म खान योग्य बनाउँछन् ।
फ्याटले ऊर्जा क्यालोरी बढाउँछ। एक कप फ्याटरहित ग्रिक दहीले एक सय क्यालोरी ऊर्जा दिन्छ र शून्य फ्याट हुन्छ। ‘होल मिल्क’ जमाएर बनाएको दहीमा ७ ग्राम स्याचुरेटेड फ्याट र १ सय ९० ग्राम क्यालोरी ऊर्जा हुन्छ। तर, चिनी मिसिएको र फलफूलसहित अन्य मिठाइ मिसाइएको दहीमा चिनीको मात्रा सामान्यभन्दा तीन गुणासम्म बढी हुन्छ । यसले पोषिलो, स्वास्थ्यवर्धक दहीलाई अत्यधिक क्यालोरीयुक्त बनाइदिन्छ ।
६ औंसको एक कप सामान्य दहीमा १२ ग्राम चिनी हुन्छ भने फ्याटरहित त्यति नै फ्रेन्च भेनिलामा २५ ग्राम र चकलेटी स्वादको एक कपमा ३५ ग्राम वा त्यसको तीन गुणा बढी चिनी हुन्छ । बरु, गुलियो नै चाहिए दहीमा ताजा फलफूल (खासगरी बेरी जातका ऐँसेलु, कालो अंगुर, फडिर, काफल, आलुबखडा, स्ट्रबेरी आदि) मिसाउनुहोस् जसले प्राकृतिक गुलियोपनाका साथै फाइबर (रेशा) पनि दिन्छ।